यी चार राशीले निकै नै धन कमाउँछन् हेर्नुहोस् कतै तपाईको राशी त परेन ! जानकारीको लागि शेयर गर्नुहोस ! « Onlinetvnepal.com
यी चार राशीले निकै नै धन कमाउँछन् हेर्नुहोस् कतै तपाईको राशी त परेन ! जानकारीको लागि शेयर गर्नुहोस !
Published : 14 May, 2019 3:24 pm
धनकोसम्बन्ध दोस्रो र आठौं स्थानमा रहेका राशीसँग जोडिएकोहुन्छ । यही भएर दोस्रो स्थानमा रहेको वृषराशी हुने मानिसले धन कमाउने योग बढी हुनेगर्छ ।वृष राशीको गुरू शुक्र भएका कारण पनि यो राशीहुने मानिसहरू आकर्षक र महंगा सामान किन्न सौखिन हुन्छन् । वृषराशी हुने मानिसहरू औसत वस्तुलाई त्यति मन पराउँदैनन्शुक्र ग्रहलाई धन, विलासिता, तथा मोजमस्तीको सूचकपनि मानिन्छ । र यही कारण उनीहरू धनकमाउन निकै मेहेनत गर्ने र कमाउने अवसर खोज्ने गर्छन् । योराशी हुने मानिसले परिश्रमको महत्व बुझ्नुका साथै मोजमस्ती पनि गर्छन् । साथै वृष राशी हुनेहरू निकै जिद्दी गर्ने र आफूले चाहेको कुरालाई पाएर नै छोड्ने प्रयास गर्छन् ।
वृश्चिक राशी हुने व्यक्तिले भौतिक वस्तुप्रति बढी आशक्ति देखाउँछन् । महंगा सवारी साधन, महल, तथा वस्तुले यी मानिसलाई सधैं आकर्षित गरेका हुन्छन् । वृश्चिक राशी हुने मानिसहरू कुशल यापारी हुन्छन् । जीवन तथा संसारलाई हेर्नेदृष्टिकोण पनि अरूको भन्दा फरक हुने गर्छ ।
कर्कट राशी हुने व्यत्तिहरू सधैं राम्रो अवसरको खोजीमा हुन्छन् । बढी भावुक हुनेभएकाले आफन्त र परिवारलाई कसरी सुखीराख्ने भनेर सोचिरहेका हुन्छन् । परिवारको इच्छालाई कसरीपूरा गर्ने भन्नेमा नै यी मानिसले बढी ध्यानदिएका हुन्छन् । यही गुणले गर्दा नै उनीहरूबढी मेहेनती हुने र आफ्नो सपनालाई पूरा गरेरछाड्छन् ।
सिंह राशी हुने मानिसले आफूलाई अरूभन्दा फरकबनाउन खोज्छन् । अरू मानिसले आफूलाई ध्यान देऊन्, आफ्नोप्रशंसा गरून् र आफूलाई आदर्श मानून् भन्ने चाहना हुन्छ ।यही भएर आफूसँग भएको क्षमता र गुण प्रस्तुत गर्नेगर्छन् । नेतृत्व गर्ने विशेष क्षमता भएका यी मानिससँग ठूल्ठूला चाहना पनि हुन्छन् । महंगा सवारी साधनमा घुमफिरगर्न चाहने, महंगा मोबाइल प्रयोग गर्छन् । आफ्नो व्यक्तित्वलेअरूको ध्यान तान्न खोज्छन् । यस्ता गुण भएका कारण नैउनीहरू धन कमाउन लालायित हुने गर्छन् र कमाउँछन् ।